Andrey Molchanov: Biography, umsebenzi, ephathelene nemikhankaso yezombusazwe
Molchanov Andrey Yurevich - usomabhizinisi isiRashiya, usihlalo kanye owayengumongameli "LSR". Wamiswa Umsizi UNgqongqoshe wezeMpilo kanye WeNtuthuko WaseRussia, kodwa kamuva kwesokunxele okuthunyelwe. Ngokusho Forbes ngo-2013 wonke umcebo wakhe kwaba $ 1.65 billion.
Andrey Molchanov wazalwa eLeningrad ngo-1971. Ngemva kokuqeda isikole, wangena Saint Petersburg State University, Faculty of Economics, okuvela kulo wathola iziqu ngo-1993. Khona-ke wafunda Academy of kuMsebenti waHulumende futhi kamuva eminyakeni emihlanu baba onguchwepheshe emkhakheni isimo nokuphathwa kamasipala.
Ngo-1993 yena wasungula OJSC "LSR Iqembu" - zezimboni nokwakhiwa inkampani, eyayiholwa kuze 2007, waze waba yisikhonzi umsizi. Ngo-2008 wakhethwa ilungu Federation Council of Leningrad esifundeni. Okwamanje, u-Andrey Molchanov, umkakhe nezingane zabo ezimbili bahlala eMoscow.
It has imiklomelo kanye nezitifiketi eziningi. Phakathi kwabo - ngendondo "Ukuze Izikhungo kuya Motherland» II degree ama-diploma ye-Federation Council of Leningrad isifunda ngendondo "Ngo inkumbulo wokugubha 300th Petersburg".
Molchanov Andrey Yurevich kunomthelela omkhulu kwi ibhizinisi ukwakhiwa Petersburg. Anakho abangane ngokwanele enethonya ukusiza kufezeke izinhloso.
Esinye isibonelo amaphrojekthi impikiswano zihlanganisa umyalo kahulumeni wezi-2002, okwenza ukuba ukudlulisa endaweni enkulu ehlathini eduze Petersburg ezweni non-ihlathi. Cishe 193 amahektha ihlathi bayiswa ukunwetshwa inkwali egwadle kanye nentuthuko eyengeziwe "Blacksmithing" ensimini, kanye nezinye ngasezinkwalini eziningana.
Ukuthuthukiswa kwakudingekile ukuba ekwakheni izidingo Petersburg, kodwa abantu abaningi abakubheka njengomklamo ke engenabulungisa ukuba -fone inhlekelele bezenhlalo nezemvelo. Sebekholelwa ukuthi Andrey Molchanov (oxhumana nabo "LSR" ayatholakala kwi-website esemthethweni, inombolo eyodwa: 8-800-770-75-77) Waxhumana nabantu abalungile futhi wasungula iphrojekthi, okuyinto kakhulu wakucabangela izithakazelo inkampani yakhe.
Andrey Molchanov wasiza Sergei Mironov, isikhulumi we Federation Council, ukuze uqinise isikhundla salo AP. Ngemva 90 basebenza enkampanini eyodwa, futhi saba abangane abakhulu. Molchanov olwenziwa namalungu umsebenzi, ebasiza ukuba ukhethe emva ukwesula Yakovlev. Ngenxa yalokho, kukasomabhizinisi MP elawulwa cishe isigamu AP futhi bathonya ukwamukelwa of izinqumo ezibalulekile zomthetho.
Ngo-2007, Molchanov ngenkuthalo waxhasa lo umkhankaso wokhetho we "Fair Russia". Ngo-2007, omunye wabantu abasiza ingxenye kule usizo Sergey Kuzmin waqala ukuqapha imisebenzi yayo. Sergey - yangaphambili umqondisi-jikelele we OJSC "Granite Smithy", inkampani, okuyinto kwakuxhomeke inkampani Molchanov "LSR".
Isimo emakethe ukwakhiwa Petersburg
Biography Andrei Molchanov egcwele izenzakalo impikiswano. Kusukela ngo-2007, izinto zokwakha emakethe usebhekene ukuhlolwa. Amanani lenyuka, futhi banikezwe yokuthi izindleko izindlu isigamu eyakheke zokwakha, obumbi imtholile emakethe ingcebo. Intengo per imitha square isibe eliphakeme nakakhulu, uhlelo "okungabizi Ezezindlu" waqala kubonakale kungenakusebenza futhi ezingenanzuzo.
Wonke umuntu wayazi ukuthi izinto zokwakha emakethe Petersburg ilawulwa inkampani eyodwa - "Iqembu LSR" U-Andrey Molchanov. Usomabhizinisi waqala ukuthwebula emakethe eside ngaphambi crisis. Wayengumuntu inhloko ngomunye wabokuqala izimali ivawusha utshalomali. Labo izisekelo Kwamiswa ukusiza labantu Russian ukutshala amavawusha. Andrey Molchanov wathenga ivawusha endalini isenzo "Stroydetal" ezimbonini zokwakha.
Ngokuhamba kweminyaka inkampani sachuma futhi ekugcineni waba umdlali enkulu emakethe, ukulawula 70% ukukhiqizwa izitini, 70% isihlabathi futhi cishe kwesigamu nezinye izinto zokwakha. Ngesikhathi esifanayo, "LSR Iqembu" uyakhile 25% okunethezeka izindlu Petersburg. Kwezinye izindawo kwaba esinakho futhi osungulwe amanani izindlu. Idolobhana baba kuncike inkampani eyodwa.
"LSR Iqembu" aqala ukuphelelwa isithakazelo emzini, benze kunakwe eMoscow nesifunda eMoscow. Petersburg babhekana nosongo ukusweleka okukhulu zokwakha. Andrey Molchanov iyiswe dolobha, uye uvule ihhovisi lapho futhi waqala ukuze uthumele imali eMoscow.
Vele yimpumelelo kangakanani kwaba ngo-2007 i-usomabhizinisi, kungaba liyokwahlulelwa Forbes isilinganiso. Ngokusho kwakhe ngaphansi kokuqondisa amafa Molchanov sika ayaziswa ku- $ 660 million.
Ngo-2007, u-Andrey Molchanov usomabhizinisi ikhetha ukushiya umsebenzi wakhe futhi uthole umsebenzi Ministry of Health njengoba umsizi Mikhail Zurabov. Wasiza kakhulu osekukade ubuhlobo nge kwamaphini, kuhlanganise Mironov.
Ngo-2008, Forbes wafingqa imisebenzi yayo ibhizinisi, uyifake kuqala simo the osomabhizinisi abacebe Petersburg. Ngaleso sikhathi isimo sakhe sasibucayi $ 4.9 billion. Nokho, ngemva konyaka, lesi sibalo sehle izikhathi eziningana futhi kwaba $ 0.45 billion.
Renunciation we "Fair Russia"
Ngo-2010, uMbusi Valery Serdyukov, abaningi wabikezela a ukwesula. Andrey Molchanov ngangifuna ukulwela ilungelo esihlalweni sakhe, kodwa wayazi ukuthi Social Democrats ngoba lokhu asihambisani kahle. Kwakudingekile ukuhoxa kuwonkewonke "Fair Russia". Ngaphezu kwalokho, u-Andrey Molchanov, izithombe okuvame kubaneka phambili ekukhulumeni kwabezindaba, kusho hhayi kuphela ukuyeka ngezimali zangaphandle, kodwa futhi entry kungenzeka zibe "United Russia".
Molchanov wahlela yonke into ukuze ukukhuthazwa elilandelayo umsebenzi uthole e-Leningrad esifundeni, yena kwadingeka izinhlelo big. Yabe seyaziwa eminyakeni embalwa.
Ngo-2012, "LSR Iqembu" wenza isitatimende elikhulu ekuqaleni iphrojekthi entsha eziyinkimbinkimbi Amatebhe lezeMpi Medical Academy. I-Academy wathuthela edolobheni resort of Sestroretsk, okunenani elingu- $ 10 bhiliyoni, futhi abaningi ngokuthi inani elikhulu.
Sekube nezigameko eziningi amahemuhemu ukuthi uthole oda leyasita Leo Vinnik, esikhundleni sokuba liSekela lomNqophisi Zombelele we "LSR". Ngaphambili, Leo wayesebenza esikhumulweni Petersburg ukuphatha futhi yakhelwe ezweni wentuthuko. Ngu-2007, waba umeluleki Anatoly Serdyukov, inhloko yentela yombuso kanye ne-uNgqongqoshe wezokuVikela. Ngokusho eziningi, sibonga oxhumana Winnick angaba umqalisi we Academy sinyathelo Sestroretsk.
Molchanov Andrey Yurevich, biography elibonisa ukubaluleka ukuphola njalo, ungakhohlwa ngezombusazwe. Ngo-2012, leli qembu "United Russia" senziwa 3 nembangi umbusi Leningrad esifundeni, kodwa uMongameli u-Alexander wakhetha Drozdenko.
Ngawo lowo nyaka Andrey Molchanov ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili State Duma iPhini Eduard Yanakov ngithenge Riga amaphephandaba Russian. Iziphathimandla zendawo zikhathazekile ngokuthi cindezela isiRashiya Latvia kwaba ngaphansi kwethonya ibhizinisi, kodwa kwakungekho lutho, kepha bahluleka.
Ngo-2013, u-Andrey Molchanov enquma ukuphindela umsebenzi ebhizinisi kanye ukushiya ezombusazwe. Akumangazi, ngoba ngonyaka odlule, akasenawo ezingaphezu kuka $ 50 million. Andrew ubuyela inkampani yakhe "LSR" futhi engusihlalo wesigungu.
Ngasekupheleni kwalowo nyaka, Petersburg uphenyo ku ukulethwa ayizinkulungwane 40 yekhwalithi ephansi enezisekelo zikakhonkolo yonkana Russia. Inani umonakalo balinganiselwa ku ruble abangaphezu kwezigidi eziyinkulungwane, okwashukumisa osizayo Molchanov "LSR-operation." Ngokusho esiphethweni setha amapuleti bayilalele imithetho isimo. Icala lobugebengu awuthintekanga yinkampani, izikhulu wathweswa icala lokuphatha izinto.
Ltd. wathenga "Royal Gardens Ihhotela" Ngo-August 2013, "LSR". Le nkampani wayenalo ilungelo lokwenza kabusha substation ukuvinjezelwa. Fontanka, 3, futhi ukwakha kule ehhotela indawo.
Le phrojekthi wahlangana ukumelana phezu ingxenye abahleli bedolobha. Lesi sakhiwo ikhona kusukela ezinsukwini kweMpi Yezwe II futhi kunikwe amandla trams e emzini ovinjezelwe. Ukuze nokuvinjelwa ke sekuwuphawu wokunqoba. Nokho, ngokuvumelana luhlolo eyenziwa yinkampani "Art Deco", isakhiwo akazange zinenani ekhethekile, futhi inkampani ithole imvume yokufaka ukwakhiwa ucingo.
Ngu 2015, impikiswano ukwakhiwa akusho abohle, lo somabhizinisi ebuzwa umbusi ukuze awuvikele gradozaschitnikov. Andrey Molchanov, ogama umndeni - ngenkosikazi nezingane eziyisithupha, Elizabeth - exinwe ukwehluleka yephrojekthi.
Subcontracting - kuyini, futhi kanjani kahle ungahleli i-accounting?
Businessman Michele Ferrero: Biography, umlando impumelelo, isithombe
Dmitry Itskov, a multimillionaire: Biography
Kungakhathaliseki ngamathuba ebhizinisi e-Russia
Inhlokodolobha egunyaziwe: umqondo, ukubaluleka, izici
Indlela ukupheka Unogwaja kuhhavini, ngakho-ke kwaba ithenda futhi flavorful
Umkhuhlane we-cigaretta ka-elektroniki Amaphayiphi amahlanu - ukukhethwa kwamagesi anamandla
Ukubalwa kwephule-ngisho nephuzu
Thermal Amafutha Zalman ZM-STG2: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
Alexey Zavyalov (umlingisi): Biography, Filmography, izithombe
Boxing Umlando: imvelaphi, izinsuku ezibalulekile kanye okwakwenza abashayi-sibhakela engcono
Sochi sibhedlela "Green Grove": ukubuyekezwa, izithombe kanye namakheli
Euonymus European - enhle esimila Ornamental!
Umlobi Averchenko Arkady Timofeevich: Biography, izici amaqiniso zokudala futhi ezithakazelisayo
Kungani ageleza indlebe noma otitis abezindaba kuyinto
Ukulungiselela Isofra: ukubuyekezwa kanye nezicelo
Filler phansi esobala: incazelo ubuchwepheshe, izithombe